I-China yaseJamani uhlobo lwe-hose clamp Umenzi kunye neefektri | Iglasi
Uhlobo lwaseJamani clutch hose clamp ine-9mm kunye ne-12mm bandwidth, i-Tooth clasp embindini.
Isangqa esingafakwisekanga sohlobo lwenqanawa yeJamani ye-hose iqinisekisa ukuba ithambeka le-silicone elithambileyo ayixineki okanye lisike ngexesha lokufakwa kunye nesicelo sokugqibela sedabi, ngelixa igcina ingqibelelo yonxibelelwano kwaye inikezela ngokuqina okuqinileyo, ngokungqinelana ne-DIN3017.
Ukuchwetheza ngepensile okanye ukurekhoda kwe-laser.
Ukupakisha okuqhelekileyo yingxowa yeplastiki, kwaye ibhokisi engaphandle yibhokisi. Kukho ileyibhile ebhokisini.Sokufakelwa imbonakalo (ibhokisi emhlophe ecacileyo, ibhokisi yomsebenzi, ibhokisi yemibala, ibhokisi yeplasitiki, ibhokisi yesixhobo, i-blister, njl.njl.)
Sinenkqubo egqibeleleyo yokuhlola kunye nemigangatho esemgangathweni. Isixhobo esichanekileyo sokuhlola izixhobo kunye nabo bonke abasebenzi bangabasebenzi abanobuchule bokuzihlola okwaneleyo. Ilayini nganye yokuvelisa inomhloli oqeqeshiweyo.
Inkampani ineenqwelo zokuhambisa ezininzi, kwaye iseke ubudlelwane bexesha elide bentsebenzo neenkampani ezinkulu zokungena, isikhululo seenqwelomoya iTianjin, iXingang kunye neDongjiang Port, ivumela iimpahla zakho ukuba zisiwe kwidilesi ekhethiweyo ngokukhawuleza kunangaphambili.
Uhlobo lwaseJamani clamp hose zisetyenziswa ngokubanzi: kwiimoto, kumashishini nakwimizi mveliso yaselwandle.
Izibonelelo zokuqala zoKhuphiswano:
Uhlobo lwesiJamani isitampu somphandle luqinile kwaye luhlala luqinile. Amacala angenanto anefuthe lokukhusela kwimbiza. Uyilo lwe-convex kunye ne-concave ngaphakathi ngaphakathi lunesiphumo esingcono sokulungiswa kwi-hose, enokuthintela i-hose ukuba ingawi okanye iwele umva.
I-Zinc ibekwe ecaleni
I-200ss / 300ss
ii-PC / ibhegi
iipcs / ibhokisi
Edlulileyo: Ucingo oluphindaphindiweyo lwe hose
Okulandelayo: Uhlobo lwaseJamani hose lubamba ngesiphatho
Uhlobo lwaseJamani uhlobo lweshampu yokuxhuzula ngaphandle kwentsimbi (nge-s ...
Uhlobo lwaseJamani hose lubamba ngesiphatho
Uhlobo lwesiJamani isitampu se-hose ngaphandle kokutshisa